September 2009 – အတ္တကျော်ရဲ့ စာပေါင်းစုံ
Author lettwebawPosted on 29 September 2009 17 February 2010 Categories Love & Marriage, Reproduction5 Comments on How Honest Are Couples, Really?
Audio: This Time Last Year
နောက်ထပ် ရေဒီယို အသံလွှင့်ချက်တစ်ခုပါ
မနှစ်က သီတင်းမကျွတ်ခင်မှာ ရန်ကုန် ဆစ်ထီး အက်(ဖှ်)အယ်(မ်)ရေဒီယိုရဲ့ ကြယ်ပွင့်များနဲ့ တွေးဟန် (Stars & Style) ဆိုတဲ့ အစီအစဉ်က ကျွန်တော်နဲ့ တွေ့ဆုံ မေးမြန်းခန်း အစီအစဉ်တိုလေးတစ်ခုကို တင်ဆက်ခဲ့ဖူးပြန်ပါသေးတယ်။ အဲဒါကိုတော့ စာသားအနေနဲ့ လုံးဝ ပြန်လည် ကောက်ယူထားခြင်း မရှိပါဘူး။ ဒါ့ကြောင့် ရှေ့က လူကြိုက်များသူများရဲ့ အကြိုက် (Popular’s Choice) ရေဒီယိုအစီအစဉ်တုန်းကလို ဖတ်လို့ မရဘဲ နားထောင်နိုင်ရုံသက်သက်သာ ရှိနေပါတယ်။ အဲဒါလေးကို ပြန်လည် တင်ဆက်ထားပါတယ်။ အိမ်ထောင်ရေး၊ ချစ်သူ ရွေးချယ်မှုတို့နဲ့ ပတ်သက်ပြီး ကျွန်တော့်သထောထားလေးတွေပါ။
Author lettwebawPosted on 28 September 2009 28 September 2017 Categories FM Broadcasts, Love & Marriage, ReproductionLeaveacomment on Audio: This Time Last Year
Interview with City FM (Part4Last)
ကျွန်တော့် နောက် ဘလော့(ခ်)မှာ ဆစ်ထီးအက်(ဖ်)အယ်(မ်)နဲ့ အိမ်သာဗျူး နောက်ဆုံး အပိုင်းကို တင်ဆက်လိုက်ပါတယ်။
အပိုင်း လေးပိုင်းစလုံး ပြည့်စုံသွားပါပြီ။
http://lettwebaw.mylovecafe.com မှာ သွားရောက် နားဆင်တော်မူနိုင်ကြောင်းပါ ခင်ဗျား။
Author lettwebawPosted on 27 September 2009 27 September 2009 Categories InformationLeaveacomment on Interview with City FM (Part4Last)
Author lettwebawPosted on 26 September 2009 17 February 2010 Categories Reproduction, Thoughts4 Comments on Will & Way
ကျွန်တော့်ရဲ့ အသံဖိုင်တင်လို့ရတဲ့ ဘလော့(ဂ်)မယ် ရန်ကုန်ဆစ်ထီး အက်(ဖှ်)အယ်(မ်)နဲ့ အိမ်သာဗျူးရဲ့ တတိယပိုင်းကို တင်ဆက်ထားပါတယ်။ Audio Player ထည့်တတ်သွားပြီမို့ connection ကောင်းတဲ့ အရပ်ဒေသမှ လူကြီးမင်းများ တိုက်ရိုက် နားဆင်နိုင်ကြပါပြီ ခင်ဗျား။
တစ်ဆက်တည်းမှာပဲ ကျွန်တော် အရင်က အဲဒီ့ ဘလော့(ဂ်)မှာ တင်ခဲ့တဲ့ အသံဖိုင်များဖြစ်တဲ့ ရှေ့က အိမ်သာဗျူး နှစ်ပိုင်းရယ်၊ ကျွန်တော့်အသံပြဲကြီးနဲ့ အားမနာလျှာမကျိုး ဆိုထားတဲ့ “ငယ်ချစ်ဟောင်းနဲ့ နှစ်ပေါင်းများစွာ”တို့ရယ်ကိုလည်း တိုက်ရိုက်နားဆင်လိုက နားဆင်နိုင်ကြပါပြီ။
Author lettwebawPosted on 26 September 2009 26 September 2009 Categories InformationLeaveacomment on WOW, I DID IT!!!
Author lettwebawPosted on 26 September 2009 17 February 2010 Categories FM Broadcasts, InformationLeaveacomment on Interview with City FM (Part2of 4)
Interview with City FM (Part 1 of 4)
Yangon City FM Radio ရဲ့ Popular’s Choice အစီအစဉ်မှာ ပြောခဲ့ဆိုခဲ့သမျှကို သည် ဘလော့(ဂ်)မှာ ရှေးသရောအခါက စာသားများအဖြစ် တင်ဆက်ခဲ့ပြီးပါပြီ။ အသံအနေနဲ့တော့ သည် ဘလော့(ဂ်)မှာ တင်လို့ မရလို့ မတင်ဖြစ်ခဲ့ပါဘူး။ အခုတော့ ကျွန်တော့်ရဲ့ နောက် ဘလော့(ဂ်)တစ်ခုဖြစ်တဲ့ http://lettwebaw.mylovecafe.com/ မှာ အသံဖိုင် တင်နိုင်သွားပြီမို့ အဲဒီ့ အိမ်သာဗျူးရဲ့ ပထမပိုင်းကို တင်ဆက်ထားပါတယ်။ သွားရောက် download လုပ်ကာ နားဆင်တော်မူ(လိုက) မူနိုင်ကြကြောင်းပါခင်ဗျား။
Author lettwebawPosted on 24 September 2009 17 February 2010 Categories FM Broadcasts, InformationLeaveacomment on Interview with City FM (Part 1 of 4)